रित्तै हात फर्किन विवश छन् सुत्केरी – Rajdhani Daily
बाजुरा। बूढीनन्दा नगरपालिका–१० पाण्डुसैनकी दुर्गा रावलले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा पुगेर छोरीलाई जन्म दिइन् । उनको यो दोस्रो बच्चा हो । पहिलो बच्चा हुँदा उनले चारपटक गर्भ जाँच गराएबापत १÷१ सय र यातायात खर्चबापत १ हजार ५ सय गरी १ हजार ९ सय रुपैयाँ पाएकी थिइन्, यसपटक उनले एक रुपैयाँ पनि पाइनन् ।
‘पहिलोपटक बच्चा पाउँदा मैले पैसा पाएको थिएँ, यसपटक कसैले पनि पैसा लैजा भनेनन्,’ उनले भनिन् । उनीजस्तै अरू तीन जना पनि सुत्केरी भएका थिए, उनीहरूले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएबापतको यातायात खर्चसमेत पाएनन् ।
बडिमालिका नगरपालिका–७ रजातोलीकी लक्ष्मी जोशी पनि बिहीबार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा पुगेर सुत्केरी भइन् । उनीसँगै उनकी आमा तुला पाध्याय थिइन् । उनले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएपछि यातायात खर्च पाउनुपर्ने हो, छोरीलाई रित्तै फर्काए ।’ बाजुराका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकाले प्रोत्साहनस्वरूप पाउने यातायात भत्ता दिएर घर फर्काउनुपर्ने प्रावधान भए पनि स्वास्थ्यकर्मीले भने उधारै राखेर उनीहरूलाई रित्तै घर फर्काएका छन् । ‘स्थानीय तहमा समयमै बजेट निकासा नहुँदा समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । सुरक्षित प्रसूति सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न एक हातमा बच्चा र एक हातमा प्रोत्साहन रकम दिने प्रावधान कायम थियो । तर, बाजुराको सदरमुकाममा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा साउनयताका सुत्केरी हुन आउने आमाहरू कसैले पनि प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयकी स्टाफ नर्स मन्देवी पाध्यायले सुत्केरीलाई प्रोत्साहन रकम दिन नसकेको स्विकारिन् ।
मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनेलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । बाजुरा जिल्लामा सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । यस वर्ष सरकारले रकम बढाएर दोब्बर बनाएको छ । हिमाली जिल्लामा पर्ने यस जिल्लामा यातायात खर्च, चारपटक गर्भजाँच, सुत्केरी गराएबापत र सुत्केरी गराउन खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ३ सय गरेर एक जना सुत्केरीलाई ५ हजार १ सय खर्चिने योजना सरकारको छ । तर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले यो रकम बडिमालिका नगरपालिकासँग रकमै नमागेकाले सुत्केरी रित्तो हात फर्किन विवश छन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा साउनमा १८, भदौमा १८, असोजमा २८ र कात्तिकमा २२ जना सुत्केरी भएका छन् भने मंसिर महिनाको रिपोर्ट तयार नभएको निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. टीका राईले बताएका छन् । डा. राईले भने, ‘मातृ स्वास्थ्य स्यहार कार्यक्रम हेर्ने संयोजकको कमजोरीका कारण यो समस्या आएको कार्यालयले नगरपालिकामा रकम माग नगरेका कारण रकम भुक्तानी हुन नसकेको बताए । बडिमालिका नगरपालिका स्वास्थ्य संयोजक टेकबहादुर खड्का नगरपालिकाका अन्य स्वास्थ्य संस्थाले समयमा माग गरेर सुत्केरी भत्ता बाँडेको बताउँदै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मागै नगरेको बताउँछन् ।
Tags: विवश छन् सुत्केरी